DEG DEG+Daawo Sawirro:-Barakac xoogan oo Hadda ka socda qeybo ka mid ah magaalada. | Galmudug TV
Home WARARKA DEG DEG+Daawo Sawirro:-Barakac xoogan oo Hadda ka socda qeybo ka mid ah...
DEG DEG+Daawo Sawirro:-Barakac xoogan oo Hadda ka socda qeybo ka mid ah magaalada.
War Hadda Ku Soo Dhacay Xafiiska Warqabadka Galmudug Tv Ayaa Sheegeya In Boqolaal qoys oo ku noolaa qeybo ka mid ah Magaalada B/weyne ee gobolka Hiiraan ayaa saacadihii la soo dhaafay ka barakacay guryahooda ka dib markii uu ku soo fatahay webiga Shabelle ee dhexmara magaaladaas.
Xaafadaha webiga ku fatahay ee laga barakacayo ayaa waxaa ka mid ah Xaawo-Taako, Kooshin iyo qeybo ka mid ah xaafadda Buundo-weyn ee Magaalada Beledweyne.
Waxaa kale oo jira xaafado laga cabsi qabo in webigu ku soo fataho kuwaasoo dadkii degenaa ay bilaabeen iney ka sii gurtaan alaabadooda ka dib markii la siiyey digniin ka soo baxay Maamulka gobolka.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin ayaa warbaahinta u sheegay in tirada dadka ka barakacay fatahaada Magaalada ay qiyaastii gaarayaan 9,000 oo ruux kuwaasoo maciin biday degaannada taaga ah ee dulleedka Bari gaar ahaan Ceel Jaalle.
Waxaa uu ka deyriyay xaalada nololeed ee dadka ka barakacay guryihii ay ku noolaayeen, kuwaasoo uu sheegay iney xaalad adag oo nololeed ku heysato degaannadii ay u barakaceen.
“Wax u diyaarsan ma jiraan dadka barakacay meel cidlo ah ayey daadsan yihiin, ma heystaan guryo iyo Hoy ay gallaan iyo musuqulo, waxa intaa uga sii daran roobka oo wali ku dul da’aya, waxaa ay u baahan yihiin in lala gaaro kaalmo degdeg ah ah’’ ayuu yiri guddoomiyaha.
Guddoomiyaha ayaa intaa ku darray inay hayaan xog ku saabsan biyo ka soo rogmaday roobabka ka da’aya Itoobiya oo ku soo fool leh magaalada, waana tan keentay in 30% dadkii ku dhaqnaa magaalada goor hore isaga sii baxaan iyaga oo ka cabsi qaba wax-yeelo ka soo gaartay biyahan digniinta laga soo saaray.
Fatahaadaha webiyada ayaa sidoo kale saameysey gobolo badan oo ay ka mid yihiin Sh/hoose, Gedo, Sh/dhexe iyo degaano kale iyagoo qaaday beero badan oo dalagyo kala duwan ay ka baxayeen.
Fatahaadan ay sameynayaan webiyada Jubba iyo Shabelle ayaa ku soo aadaya xili ay bilowdeen roobabkii xiliga Gu’ga oo haatan si fiican uga da’aya inta badan gobolada Somalia.
Previous articleDEG DEG:-Khilaaf Xooggan Oo Soo Kala Dhex Galay Iiraan Iyo Reer Galbeedka.
Next articleSawirro:-Madaxweyne Waare oo shir jaraa’id ku dhex qabtay biyaha ku fatahay Belad-weyne.
Arday lagu soo qaaday sariirta dadka xanuunsan oo maanta galay imtixaanka Dowladda.
Nin u dhashay Masar oo Sacuudiga loogu xiray in uu gabar la quraacday
Madaxweynaha Jubaland oo ka hadlay saraakiishii dowladda ee lagu joojiyay garoonka Kismaayo.